Ejipta · Aogositra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Aogositra, 2008
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Aogositra, 2008
Fitantanam-pitondrana 21 Aogositra 2008
Fifidianana 21 Aogositra 2008
Ejypta : Olo-manga arabo telo no nodimandry
Palestina 20 Aogositra 2008
Very olo-manga teo amin'ny lafiny kolotsaina telo be izao ny tontolo Arabo tao anatin'ny iray volana ; dia i Dr Abdel Wahab El Miseiri, filozofy sy ilay mpamokatra sarimihetsika Youssef Chahine samy avy ao Ejypta – ary ny poeta palestiniana Mahmood Darwish. Izay no resahin'i ElGharep, na The Stranger, mpitoraka...
Tany Arabo:Vehivavy, tokantena, handao ny akany?
Arabia Saodita 12 Aogositra 2008
Ho an'ny ankamaroan'ireo vehivavy tokantena arabo, ny hiaina sy hiasa na handranto fianarana lavitry ny fianakaviana dia safidy tsy mora atao, noho ny tahotra ny hoe “Dia inona no ho lazain'ny olona”. Manerana ny tontolo arabo, vehivavy mpitoraka blaogy maro no efa naneho ny ahiahiny mikasika ny olana sedrain'ireo vehivavy...